Motor Generator nju - China Ningbo enweghị
Motor nju China Neodymium Motor nju, Ferrite Motor nju, SmCo nju Ningbo enweghị Magnetik Company Limited Nlụpụta moto nju tinyere sintered & bonded neodymium nju, ferrite & seramiiki nju, alnico nju, samarium cobalt nju (smco) nke ike-eji dị ka rotor ma ọ bụ stator dị iche iche na-adịgide adịgide magnet Motors dị ka electric Motors, Synchronous moto, Servo Motor, PM Motors, AC Motors, DC Motors, Linear Motors, N'itinyekwu Motors, Brushless Motors, wdg ...
China Neodymium Motor Magnets, Ferrite Motor Magnets , SmCo nju
Ningbo enweghị Magnetik Company Limited Nlụpụta moto nju tinyere sintered & bonded neodymium nju , ferrite & seramiiki nju, alnico nju, samarium cobalt nju (smco) nke ike-eji dị ka rotor ma ọ bụ stator dị iche iche na-adịgide adịgide magnet Motors dị ka electric Motors, Synchronous moto, Servo Motor, PM Motors, AC Motors, DC Motors, Linear Motors, N'itinyekwu Motors, Brushless Motors, wdg
The kasị n'ọtụtụ ebe na magnetik ihe Motors bụ sintered neodymium ihe onwunwe na SmCo nju ihe onwunwe. Sintered neodymium magnet atụmatụ oké magnetik ike nke nwere ike mee ka nnukwu torque maka rotors na stators. N'etiti sintered NdFeB akara ule, ndị H, SH, EH na Uh usoro na-ewu ewu na ha nwere ike idi na-arụ ọrụ okpomọkụ ruo 100-200 ogo C enweghị adịkwa ndọta.
Otú ọ dị, dị ka a bukwanu ego nke moto ụdị ndị na-arụ ọrụ n'okpuru elu okpomọkụ, SmCo magnet na-họọrọ maka ya tụnyere magnetik ike sintered neodymium N35 ọkwa na ya max arụ ọrụ okpomọkụ nke nwere ike ịbụ ruo 250-300 ogo C.
Ngwa nke o sie neodymium ihe na Motors na-obosara-agbasa kwa maka ya oké mgbanwe nke producible shapes na magnetization Nkuzi Nnabata. Dị ka ihe atụ, anyị na-emepụta na magnetized a dayameta 30mm mgbanaka udi bonded NdFeB magnet n'ime 16 okporo osisi na 32 okporo osisi site n'obosara, bụ nke iru maka ihe ọ bụla ọzọ sintered na-adịgide adịgide magnetik ihe onwunwe.
Ọ bụrụ na kpọmkwem site ahịa, China na-adịghị ahụkebe Earth Igwe Ọdụdọ Limited nwere ike hazie ferrite, alnico na ndị ọzọ na na-adịgide adịgide nju maka ngwa na Motors.
Shapes na magnetization Nkuzi Nnabata nke moto nju : Ring shapes na aak agba magnetized site n'obosara bụ kasị maka moto nju. Dị ka kpọmkwem choro na ihe osise si ahịa, China na-adịghị ahụkebe Earth Igwe Ọdụdọ Limited pụrụ inye a dịgasị iche iche udi nke moto nju tinyere ngọngọ, diski, nkpirikpi na heteromorphic shapes.
Mkpuchi : NiCuNi, Zn, epoxy, phosphate, Passivate na ndị ọzọ.
Previous: Industrial nju
Osote: Ọkà Okwu nju